Singa mandrafitra ny tetikasa - PADAP
Ny fanangonana sy fanapariahana vaovao, ny fandaminana ny drafitra tsirairay, ny fampiasam-bola sy ny fanamafisana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao, ny fitantanan sy ny fandrindrana, ny fidirana an-tsehatraraha misy ny zavamiseho tsy azo anoharana amin’ireo tontolo voafantina no teny hifotoran’ny tetikasa PADAP.
Ireo singa 4 mandrafitra ny tetikasa PADAP
Ny singa voalohany dia ny fanangonana sy ny fanapariahana vaovao ary ny fandaminana ireo drafitra rehetra ilaina amin’ny tetikasa. Misy singa telo ihany koa mandrafitra ity singa ity tsiraiyra, ao anatin’izany ny fampivelarana ny “système d’Informations Spatiales (SIS)” na ny rafitra fampahalalana momban’ny habakabaka, sy ny “Plans d’Aménagement et de Gestion Durable des Paysages sélectionnés (PAGDP)” na ny fanomanana ny drafitra fampandrosoana sy ny fitantanana maharitra ho an’ny tontolo voafantina ary ny fananganana politikam-pitantanana ny tontolo iainana. Ny tanjony dia ny hampiharana ny fomba fitantanana amin’ny antsipirihany izay mety hiakatra amin‘ny dingana manaraka amin’ny fandaharana.
Ity singa faharoa ity indray dia mifandraika amin’ny fampanjariham-bola mahomby. Anisan’izany ny fitantanana ny foto-drafitr’asa momban’ny rano sy ny fanondrahana, ny fandravonana ny havoana, ny fikojakojana ny lalàm-be, ny fanohanana ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina ary ny fanampiana ireo mpamokatra eo an-toerana. Izy io koa dia miahy ny fitantanana ireo tontolo iainana sy faritra arovana. Ny tanjony dia ny hampiroborobo ny teknika avo lenta ary ny fampiasana ny rafitra « Paiements pour les Services Environnementaux (PSE) ». Farany ary tsy latsa-danja ihany koa, ity singa ity dia mijery akaiky ny olana mifandraika amin’ny fananganana fahaiza-manao eo amin’ny sehatry ny kaominaly, ny distrika ary ny isam-paritra. Izay mikendry ireo vondrom-piarahamonina toy « communautés de Base (COBA) »na ny vondrom-piarahamonina eny ifotony sy ny « associations d’usagers de l’eau (AUE) » na ny fikambanan’ny mpampiasa rano ary ivon-toeram-pikarohana.
Ny ato amin’ny singa fahatelo kosa dia mifantoka amin’ny fitantanana sy ny fandrindrana ny tetikasa. Andraikitry ny « Agence d’exécution du Projet (UEP)” na ny masoivoho mpanatanteraka ny tetikasa sy ny « Unités d’Exécution Régionales (UER) » izany. Izy ireo ihany koa no tompon’andraikitra amin’ny vola lany amin’ny tetikasa, ny fitantanana ara-bola, ny fanaraha-maso ary ny fanombanana, ny fanarahana ny antoka sy ny fiofanana.
Ny singa fahefatra indray dia mametraka rafitra famatsiam-bola maika hamahana ny loza voajanahary. Raha ilaina dia azo zaraina amin’ity singa ity ny vola avy amin’ireo singan’ny tetikasa hafa.